22/04/12 - 29/04/12 ~ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အခွင့်ရေးကွန်ယက်
နို့ဖိုးဒုက္ခသည် စခန်း ဆန္ဒပြမှု ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ...
အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် ထော...
သုံးခွတွင် ဝမ်းရောဂါ ဖြစ်ပွား
ပြည်တွင်းအာမခံလုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ စတင်လုပ်...
၀င်ငွေခွန်ကို ကျပ်ငွေဖြင့်သာ ဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြ...
စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ တရားဝင် ငွေလွှဲနိုင်ပြီ
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အမျိုးသားလွှတ်ေ...
နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းက ဒုက္ခသည်အချို့ ဆန္ဒပြ
မြန်မာလုပ်သား ပျောက်ဆုံးနေမှု စင်္ကာပူ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိ...
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့ စာသား ပြင်ဆင်ဖို့ ကိစ္စ အချိန...
ဥပဒေကို လိုက်နာပါ၏ လော
တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ကြံ့ခိုင်ရေး အကြိတ် အနယ် ဆွေးေ...
ငွေလွှဲရန် ဦးတေဇဘဏ်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံက ငြင်းဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ လွှတ်တော်တွင်း ညစ်ညမ်း ဓါတ်ပုံ ပြသမှု ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ကနေဒါ ရုပ်သိမ်း...
ကျမ်းကျိန်လွှာ စကားလုံးအပြောင်းအလဲ ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်...
ရေးရာကော်မတီတွေ အဆင့်နှိမ့်ချမှု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော...
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံး ရှစ် ရုံးအထိ ထိုင်း၌ တို...
မြန်မာ့ပြောင်းလဲမှုကို ကူညီကြရန် ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွ...
ဖူးကတ် အဝတ်လျှော်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများဆန္ဒပြ
ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားစဉ် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမ...
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးသွား သည့်ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ...
ထိုင်းရောက် မြန်မာကလေးငယ်တစ်ဦး အဓမ္မလုပ်အားခိုင...
ကျမ်းကျိန်လွှာပြင်ရေး လွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရက်တစ် ပါ...
ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဓိပတိ (အဖြူ)ယာဉ်လိုင်းမှ ...
﻿ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကတိသစ္စာပြုချက်တွင် ...
မြန်မာလူငယ်ကို ဆိုရှယ်လစ်လူငယ်အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ တာ...
﻿ ‘လွှတ်တော်မတက်ဘူးလို့ မပြောဘူး။ သွားနိုင်မယ့် အချ...
﻿ ပြည်တွင်းပြောင်းရွှေ့ သွားလာမှုစစ်တမ်းကို လူဝင်မြှု...
ယခုနှစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပြည်ပတင်ပို့မှုမှ ရငွေ အမေရိကန...
﻿ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး စတော့အိပ်ချိန်း တည်ထောင်ရန် ...
မြန်မာတင်နေတဲ့ အကြွေး ဂျပန်လျှော်ပေးဖို့ သဘောတူ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်၊ နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့က ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုမှာ ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေကို တပ်ခ်ခရိုင် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်၊ နို့ဖိုးဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒုက္ခသည် (၂၀၀) ကျော်က အချက် (၄) ချက်ပါ တောင်းဆိုချက်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
22:26 M W R N O R G No comments
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေဟာ အခြေခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ EU နိုင်ငံခြား မူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton ကပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထဆုံး EU ရုံးကို လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့ EU အကြီးအကဲဟာ ဒီနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးစတဲ့ EU က မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေကို ယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို EU အကြီးအကဲ ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်း အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး EU ရုံးကို EU နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton နဲ့ ရန်ကုန် တိုင်း၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေတို့က ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားမြိုင်လမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို EU က တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု တွေကို ယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီး ခုလို EU ရုံးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EU သံတမန်တွေ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NGO တချို့ တက်ရောက်ကြတဲ့ ဖွင့်ပွဲမှာ EU အကြီး အကဲ Ashton က မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိအပြောင်းအလဲတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၇ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ EU ရုံးခန်းကို ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ရောက်နေပါပြီ၊ သွားရမဲ့ခရီးက ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်၊ ဒေသ တွင်းမှာသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာပါ အတုယူစရာဖြစ်မဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖုိ့ EU က မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီသွားမှာပါ"
မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေ နောက်ပြန်မလှည့်ဘဲ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"EU အနေနဲ့ ပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အကူအညီတွေကိုပေးသွားပါမယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် တခု လုံးမှာ EU ဥရောကသမဂ္ဂအနေနဲ့ မိတ်ဆွေအဖြစ် ရပ်တည်သွားပါမယ်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှေ့ဆက် သွားဖို့ ကူညီတဲ့ တချိန်ထဲမှာပဲ မြို့တွေ၊ ရွာတွေမှာ နေထိုင်ကြသူတွေ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသက ပြည်သူတွေ အတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့အစီအစဉ်တွေမှာ EU ကထိတွေ့ဆက်ဆံသွားမယ် ကူညီသွားပါမယ်"
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ့ EU ရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး တာဝန်ရှိသူ Ms. Ashton ဟာ အစောပိုင်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ ဒဏ်ခတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို EU က ယာယီရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ EU အကြီးအကဲက ပြောပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်လည် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ ရေရှည်ခံဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း EU မူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲက အလေးထားပြောသွားခဲ့ပါတယ်၊
"အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့ အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့သိပါတယ်၊ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ အခြေခိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ အာမခံချက်ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်၊ ရေရှည်ခံတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ရေးမှာ EU ကလည်း လက်တွဲကူညီနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်"
EU နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲ Catherine Ashton ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၃ ရက် ခရီးစဉ်နဲ့ရောက်နေ တာ ဖြစ်ပြီး သူ့ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ ပါဝင် တွန်းအားပေးနေသူတွေနဲ့ အချိန်ယူတွေ့ဆုံနိုင်မယ့်အတွက် ဝမ်းသာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူဟာ မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်တော့ နေပြည်တော်ကိုသွားပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လာပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း အဆက်အဆံလုပ်ဖို့ လိုလားမှုတွေ ပြသလာခဲ့ပြီးနောက်မှာ နိုင်ငံတကာက အဆင့်မြင့် သံတမန်တွေ မြန်မာ နိုင်ငံကိုလာပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ အကူအညီတွေကို ကမ်းလှမ်းနေကြတာပါ။ မနက်ဖြန်မှာပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ban Kin Moon ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။
အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရသော မလေးရှားအိမ်ရှင်။ (Maid Nirmala Bonat's Case)( နောက်ဆက်တွဲ)
18:18 M W R N O R G No comments
တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိသော မလေးရှားနိုင်ငံ ဤအမှုအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်….။
Ms. Bonat and Ms. Yim.
Nirmala Bonat အမှုကိုယခုပို့(စ)မတိုင်မီ တွင် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုပို့(စ)အဆုံးတွင်…
“..ဤအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ မိတ်ဆွေကြီး လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ Charles Hector ၏ ဤအမှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ ဥပဒေအကြောင်းအရာများနှင့် Ms. Bonat ဘက်မှနေ၍ လျှော်ကြေးရရန် လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေများ၏ ကြိုးပမ်းမှုများ၊ မလေးရှားဥပဒေ၏ လူသားချင်းစာနာမှုမရှိပဲ နိုင်ငံသားကိုကာကွယ်ပုံများကို ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။..” ဟုဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခု ထိုအမှုနောက်ဆက်တွဲကို ဖော်ပြပါမည်။
Ms. Yim Pek Ha ကို တရားသူကြီး Judge Datuk Aktar Tahar ကထောင်ဒဏ် ၁၈ - နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ (အမှုတစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် -၁၈- နှစ်၊ ထို့ကြောင့် အမှု ၃ ခုအတွက် ဆိုလျှင် -၄၈-နှစ်၊ တစ်ပေါင်းတစ်စီးတည်း ကျခံရမည် ဆိုသောကြောင့်၊ ထောင်ဒဏ် -၁၈-နှစ်ကျခံရမည်။)။ ဤအမှုသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနှံ့ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကလည်း များစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
Ms. Bonat with her mother
တရားခံနှင့်မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းသည်ငွေကြေးလွန်စွာ ကြွယ်ဝသော ကြောင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် တရားဥပဒေကို တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
အဆိုးဝါးဆုံးအဖြစ် အမိန့်ချမှတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာတွင် တရားခံ၏ လင်ယောက်ျားနှင့်ရှေ့နေတို့က Ms. Yim ကို အာမခံရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ မလေးရှားအထက်တရားရုံးတွင် အာမခံရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သူမသည် အာမခံ (မလေးရှားရင်းဂစ် ၂၀၀ ၀၀၀ ($US54,850)) ဖြင့် အမိန့် ချခံရပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ (၂၈၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈၊ သောကြာနေ့) (မလေးရှား နိုင်ငံ အထက်တရားရုံးမှ)
Ms. Yim Pek Ha (Free from Crime happily!) and her husband
Ms. Yim သည် အမိန့်ချခံရပီး နောက်တစ်ရက်တွင် အာမခံဖြင့် လွတ်လာခဲ့သည်။
သူမသည် အမှုတစ်ခုစီအတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၈ -နှစ် ကျခံခဲ့ရ၍ စုစုပေါင်း ၄၈ နှစ်ကျခံရမည်ကို၊ ပြစ်ဒဏ်များကို တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ကျခံရမည်ဆိုသောကြောင့်၊ ပြစ်ဒဏ် ၁၈-နှစ် သာသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူမသည် ဥပဒေအရ ထောင်ထဲနေမည်ဆိုလျှင် ၁၈-နှစ်နေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအာမခံရခဲ့သည် အတွက် နောက်ထပ် အမှုနှစ်ခု ၃၆-နှစ်- သည် သူမအပေါ်တွင် ထပ်တက်လာပါသည် ဟု ကြားသိရသည်။
အာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ Ms. Yim သည် သူမအတွက် ခရီးသွားလာခွင့်ကို Kuala Lumpur မြို့ပြင်သို့သွားရောက်သည် ဆိုလျှင်၊ သက်ဆိုင်ရာကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။ သူမကို အာမခံဖြင့် လွှတ်ခဲ့သော်လည်း၊ အမှုမှ တရားသေလွတ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ တရားရေးရာမှ ပြောပါသည်။
သူမအတွက် အသနားခံစာ နှင့် ပြင်ပတွင် အချိန်ကြာရှည်စွာ အာမခံဖြင့် နေနိုင်ရန်၊ ရှေ့နေများနှင့် ငွေ ကြေးအကုန်အကျများစွာ ကုန်ကျခံ၍ ဆောင်ရွက် နေကြသည်။ သူမ၏ ရှေ့နေ Jagjit Singh က ဤအမှုသည် အသက်ဆုံးရှူံးမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီး ယိုယွင်းမှု မဖြစ်ခြင်း၊ ကြီးမားသောအနာရွတ် များစွာမဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် သူ၏အမှုသည် Ms. Yim အားတရားရုံးမှ ချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်သည် ပိုလွန်ပြင်းထန်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
လုံးဝတရားသေလွတ်မြောက်ရန် အသနားခံထားသော်လည်း ယခုထိမအောင်သေးပါ။ သူမ နှင့် သူမလင်ယောက်ျားတို့က သူတို့သည် အဖက်ဖက်မှ ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြင်ပတွင်အာမခံဖြင့် နေရချိန်ကို ကြာနိုင်သမျှကြာအောင် ဆွဲထားမည် ဟုပြောပါသည်။
ထိုကဲ့သိုဆင်တူသော အမှုတစ်ခုတွင် အိမ်ရှင် Cheng Pei Ee (အသက် -၂၉ နှစ်) သည် သူ၏အိမ်ဖော် အင်ဒိုနီးရှားသူ Kunarsih ကိုသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆို ချုပ်နှောင်ခံနေရသည်။ သူမသည် အာမခံမရဘဲ၊ သေဒဏ်ကျခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု တရားလိုရှေ့နေ များက ပြောပါသည်။ သူမ၏ အမျိုးသား Goo Eng Keng (အသက် -၃၄ နှစ်) သည် အမှုကျူးလွန်ရာတွင် ကူညီအားပေးခဲ့သူအဖြစ်နှင့် သက်သေခံများဖျောက်ဖျက်မှုအတွက် သူမနှင့်အတူတရားစွဲခံခဲ့ရပြီး (မလေးရှားရင်းဂစ် -၉၀၀၀၊ ($US2468)) ဖြင့် အာမခံရခဲ့သည်။ (photo-journ.com)
လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ Charles Hector ၏ Nirmala Bonat အမှုအပေါ် ထင်မြင်ချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်များ။
အိမ်ဖော်အလုပ်သမ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူ Nirmala Bonat အပေါ်သူမအိမ်ရှင်မှ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့မှုများသည်၊ မလေးရှား၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် ခြင်းနှင့် လူသားချင်းမစာနာကြောင်း သက်သေထူလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား တစ်ဦးသည် တရားရုံးအမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ် အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
အမှုသည် မိမိအလုပ်ရှင်နှင့်ဖြစ်ပါလျှင်လည်း၊ အလုပ်သမားသည်ကိုင်ဆောင်ထားသော စာရွက်စာတမ်းအရ အခြားအလုပ်ရှင် ထံတွင်လည်း အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဤဥပဒေသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဥပဒအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တွင်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များရ၍ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ မလေးရှားရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများမှာ မည်သည့်အခွင့် အရေး မှမရ၍ ဤဥပဒသည် လူသားချင်းမစာနာသော ဥပဒေဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မှ မိမိအလုပ်ရှင်မှလွဲ၍အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိသော အလုပ်သမားအား၊ ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း များသိမ်း၍ နိုင်ငံမှ လုံးဝထွက်ခွာမသွားရ ဟူ၍ အမိန့်ချခံရသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဤအမှုတွင် Nirmala Bonat သည် တရားလိုဖြစ်သည်။
၁။ မလေးရှားတွင် အမှုဖြစ်ခဲ့ကြသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ထိရောက်စွာဖြင့် တရားမျှတမှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်ကာ ကူညီခဲ့ပြီးပြီလား။ ရှိခဲ့လျှင် အမှုအရေအတွက် မည်မျှ ရှိသနည်း။
၂။ အမှုအရေအတွက် မည်မျှတွင် မတရားခံရသော နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများသည် မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရောက် ပြီးနောက်၊ နောက်ကြာသောအခါ တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုရန်သက်သေခံရန်၊ စရိတ်ပေးခေါ်ခြင်း၊ ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် အမှုကျူးလွန်သော မလေးရှားနိုင်ငံသားကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါသလား။ ရှိခဲ့လျှင် အမှုအရေအတွက်မည်မျှ ရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံအရ တရားလို မရောက်သောကြောင့် အမှုများပလပ်ခဲ့သည်သာ များသည်။ (Charles Hector)
၃။ မလေးရှားနိုင်ငံဘတ်ဂျက်ထဲမှ မိမိနိုင်ငံသားကြောင့် မတရားပြုကျင့်ခံရသော နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကို တရားရုံးအချိန်ရောက်သောအခါ၊ ပြန်ခေါ်ပြီး ထွက်ဆိုရန်အတွက် ငွေမည်မျှ ယခုထိသုံးခဲ့သနည်း။
Fermima Anunut (Ms. Bonatနှင့်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ၏အလုပ်ရှင်) က Ms. Bonat သည်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကိုခံစားနေရကြောင်း၊ တရားရုံးတွင်ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ Ms. Bonat ၏အမေကဤစွပ်စွဲချက်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။
နှလုံး ECGနှင့် ဆေးစစ်အဖြေများအရ Ms. Bonat တွင် ထိုသို့သောရောဂါခံစားနေရမှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ တရားသူကြီး Akhtar က အိမ်ဖော်သည် ၀က်ရူးပြန်ရောဂါကြောင့် သူမကိုယ်သူမ ဒဏ်ရာရ အောင်ပြုသည် ဆိုသော တင်ပြချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Fermima Anunut သည် Ipoh (KL မှ မိုင် ၁၀၀ နီးပါး) တွင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေသော သူဖြစ်၍ Ms. Bonat ၏ကျန်းမာရေးကို ထွက်ဆိုသည်မှာ ယုတ္တိမရှိပါ။ တရားခံတို့မှ ဥပဒေကိုလှည့်စားရန်ကြိုးပမ်းမှုသာဖြစ်သည်။
တရားရုံးအဆိုလွှာတွင် Ms. Yim သည် သူ့အိမ်ဖော်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပါးရိုက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဤသို့ကာယကံမြောက်ကျူးလွန်သည်ကို လည်း အမှုအဖြစ် နောက်ထပ်တရားစွဲဆိုနိုင်ရမည်။ Ms. Yim ကလည်း ပါးရိုက်ခြင်းကို ၀န်ခံခဲ့သည်။
Ms. Bonat သည် ၂၀၀၄- တွင်နောက်ဆုံးအကြိမ်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသည့် နေ့မှစ၍ နောက် ရက်ပေါင်း -၂၀- ထိခန္ဓာကိုယ်ကိုရေထိ၍ မရသောကြောင့် ရေမချိုးနိုင်ခဲ့။ ထိုကြောင့် သူမကိုဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် အတိအကျ မှန်ကန်သောအဖြေများထွက်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ပြင်းထန်သော နာကျင်စေမှုအဖြစ်၊ တရားဥပဒေမှသတ်မှတ်ပြီး တရားခံကို အန္တရာယ်ရှိသော ရာဇ၀တ်ကောင်အဖြစ် အမှုစီရင်သင့်သည်။
ယခင်လေယာဉ်မယ်ဟောင်း Ms. Yim သည်တရားရုံးတွင် အမိန့်ချမှတ်ခံရပြီး၊ မိသားစုကို ဖက်၍ငိုကြွေးခဲ့သည်။
DPP အစိုးရရှေ့နေ Raja Rozela Raja Toran ကသတင်းစာတွင်ရေးသားသည်မှာ - Ms. Bonat သည်စီးပွားရေးအဆင်ပြေစေရန် မလေးရှားသို့ လာရောက်ခဲ့သော်လည်း၊ သူမရသွားသည်မှာ ဒဏ်ရာများနှင့် လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ခံရခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ယောက်အနေနှင့်ခိုးမှုတစ်ခု ရှိသည်ဆိုစေဦး၊ ဤသို့မိမိကိုယ်ဒဏ်ရာရအောင် မည့်သည်စိတ်မျိုးနှင့်မှ လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Raja Rozela က Ms. Bonat ၏ဒဏ်ရာများမှာ ရေနွေး၊ မီးပူစသော သေစေနိုင်သောအရာများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ၍သာ ရခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည် အတွက် ဤအမှုသည် လူသတ်ရန်ကြံစည်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ ကြိုးပမ်းမှု စသည်အမှုများထပ်မံစွဲဆိုနိုင်သည်။
မယုံကြည်စရာကောင်းအောင်၊ ကလေးသူငယ်များ၏ မိခင်တစ်ဦးသည် အခြား ချို့တဲ့သောအကူညီမဲ့မိန်းခလေးတစ်ဦးကို ရက်စက်သည်မှာ မကြုံဖူး လောက်အောင် ဖြစ်သည်ဟု DPP မှပြောပါသည်။
Ms. Bonat သည် လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေများ၏ အကူညီဖြင့်၊ မိမိအတွက် နစ်နာကြေးလျော်ကြေးရရန်၊ ပုဒ်မ ၄၂၆- အရ Ms. Yim ကိုတရားစွဲထားပါသည်။
Ms. Yim ၏ရှေ့နေ Jagjit ကကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ သူက Ms. Bonat သည် သူအမှုသည်နှင့် အခြားသူများထံမှသနားသောကြောင့် လှူဒါန်းသော(ဤသို့ ရေးထားပါသည်။ ပြောပါသည်။) ငွေများစွာရရှိပြီးဖြစ်၍ အင်ဒိုနီးရှားတွင် လူချမ်းသာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ မိမိအမှုသည်သည် အာမခံဖြင့် လွတ်နေသော်လည်း လုံးဝတရားသေ လွတ်မြောက်ခြင်း မဟုတ်သေးသည့်ပြင်၊ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေများနှင့် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့မှ တရားစွဲထားသည် ကိုလည်း ခံနေရကြောင်းသူက ဆက်ပြောသည်။
တရားခံဘက်မှ ရှေ့နေများထဲမှ Jagjit Singh နှင့် သူ၏လက်ထောက် Akbardin Abdul Kader တို့သည် Ms. Yim အတွက်စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးပမ်းခဲ့ ကြသည်။
တရားလိုအတွက် ဥပဒေအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကို မှတ်တမ်းတင်သူ DPP မှ Stanley Augustin ကသူသည် ဥပဒေအတွေ့အကြုံသက်တမ်းတစ် လျှောက်၊ တရားခံတစ်ဦးတည်းမှ ပုဒ်မ ၃၂၆ အမှု သုံးခု ဖြင့် တရားစွဲခံရသည်ကို ပထမဆုံးကြုံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
အားလုံးပြီးစီး ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နောက်တစ်နေ့တွင် Ms. Yim သည်အာမခံ (ငွေ ၂၀၀၀၀၀ မလေးရှား ရင်းဂစ်) ဖြင့်လွတ်လာခဲ့သည်။ နောက်ထပ် တရားမှုများတွင် တရားရုံးသွားရောက်နေရဦးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် Ms. Bonat အတွက် လျော်ကြေးကို မလေးရှားဥပဒေက ဆောင်ရွက်ရန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသောကြောင့် စိတ်ပျက် စရာကောင်းပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း မထူးခြားလာခဲ့။ တရားလိုသည်လည်း အခြားနိုင်ငံမှ ဖြစ်၍ ရုံးချိန်းတိုင်းလာရောက်ရန် မဖြစ်နိုင်။ မလေးရှား အစိုးရမှလည်း တာဝန်မယူပါ။ တရားလိုက သွားလာရေးမှာ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ စရိတ်ကုန်ကျများစွာ ခံ၍လာရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မဖြစ်နိုင်လျှင်၊ တရားခံအနေဖြင့် ဥပဒေအပေါ်အမြတ်ထုတ်နိုင်သော အကျိုးအမြတ်များစွာ ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ် (Charles Hector) အနေနှင့်ပြောလိုသည်မှာ မလေးရှားအစိုးရသည် ဤသို့သောအမှုများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် လိုအပ်မှုများစွာရှိပါသည်။
Ms. Bonat (before)
အစိုးရ သည် ဤသို့အမှုဖြစ်သော နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအတွက် အမှုမပြီးမချင်းခိုလှုံနေထိုင်ရန် ဂေဟာများဖွင့်ပေးရမည်။ အစိုးရက အစစအရာရာ ထောက်ပံ့ရ မည်။ အမှုနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှူံးသည်ဖြစ်စေ အလုပ်သမားသည် ယခင်အလုပ်ရှင်ထံပြန်သွားရန် မဖြစ်နိုင်တော့သောကြောင့်၊ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ နိုင်ငံအတွင်းတွင် ဆက်လက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရမည်။ ခိုလှုံစဉ်အတွင်း အလုပ်သမားက ယင်း၏ တရားရုံးစရိတ်နှင့် သူ၏နိုင်ငံရှိမိသားစု ထောက်ပံ့ရေးအတွက် အလုပ်လိုပါက စီစဉ်ပေးရမည်။ ဤအချက်များအားလုံးအတွက် ဥပဒေများပြဌာန်းပေးရမည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့အမှု ရင်ဆိုင်ရလျှင် ထိုအမှုကို (မည်မျှ ကြီးမားသောအမှုဖြစ်စေ) ၃ လ - မှ ၆ လ အတွင်း ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
ယခု Ms. Bonat ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှုသည် တရားမျှတမှုလုံးဝမရှိပါ ဟုသူကပြောပါသည်။
အာမခံ ဟူသည် အမှုဖြစ်ပေါ်နေသော၊ အမှုတစ်ခုအတွက် အမှုရင်ဆိုင်နေရသော သူအားကိုယ်စားပြု၍ တရားရုံးတွင်တင်ပြအသနားခံ သည်ကို ထောက်ထား၍ နောက်တရားရုံးရက်ချိန်းများတွင် လာရောက်ရမည်ဟူသော ခံဝန်ချက်ဖြင့် ပြင်ပတွင်၊ ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ တရားခံသည် ထွက်ပြေးနိုင်သည်။
၂။ နောက်ထပ်အမှုများကို အာမခံကာလအတွင်း ကျူးလွန်နိုင်သော အနေအထေားရှိသည်။
၃။ သူနှင့် သက်သေများကြားမလိုလားအပ်သော ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ (တရားလိုသက်သေကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်သည်)
၂။ အကျင့်စာရိတ္တ၊ နှင့်ယင်းအာမခံရစဉ်အတွင်း နေထိုင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှသူများ၏ လက်ရှိအမှုအပေါ်ပတ်သက်နေသော ဆက်နွှယ်မှု
၃။ တရားခံ ၏ယခင် အာမခံမှတ်တမ်း
၄။ အာမခံသူများ၏ တည်မြဲယုံကြည်ရမှု
တရားရုံးသည် အာမခံကို အောက်ပါအချက်များကြောင်း ပယ်ချနိုင်သည်။
၁။ တရားခံသည် မိမိကိုယ်မိမိကာကွယ်ခြင်းဖြင့် တင်သောအာမခံ
၂။ တရားခံသည် ဤအမှုနှင့်မဆိုင်သော အခြားအမှုတစ်ခုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသော အကျဉ်းသားဖြစ်နေခြင်း။
၃။ အမှုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို တရားရုံးမှ ကျေနပ်မှုမရသေးခြင်း။
၄။ အမှုစစ်ဆေးကြားနာနေသော တရားရုံးရက်များအတွင်း တရားခံသည် အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံပြီးဖြစ်သောအခါ အသေးစိတ်အမှုဖြစ်စဉ်ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင် ချက်အတွက် ပြုစုရမည်ဖြစ်၍ တရားခံကို ချုပ်နှောင်ထားရန်လိုသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်း။
ထို့ကြောင့် Ms. Yim ဆိုသော မလေးရှားနိုင်ငံသူအားမလေးရှားအစိုးရသည် မတရားမှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို သက်သေများစွာ ရှိပါလျက် အာမခံဖြင့် ခွင့်ပြုသည့်အပြင်၊ Ms. Bonat အတွက်လည်း မည်သို့မှ တာဝန်မယူခဲ့။
ထို့ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားက အိမ်ဖော်များပို့ခြင်းကို ၂၀၀၉ နှစ်စတွင် ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ဤအမှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုများ ရှိခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ လည်း ဆန္ဒပြမှုများရက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။
Ms. Bonat အမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှား ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခု
Aljazeera News Wire
Ref: အဝေးဆီက မလေးရောက်ခရီးသည်
အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်ကို သတ်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံရသော မလေးရှားအိမ်ရှင်။ (Maid Nirmala Bonat's Case)
18:13 M W R N O R G No comments
Maid Abuse Case Investigation Reports
Tenaganita Case Reports
Aljazeera News (http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/)
18:04 M W R N O R G No comments
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်အားခ အပြည့်အ၀ရရှိရေးအတွက် ထိုင်းအလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာနနှင့် ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ယမန်နေ့က ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တာ့ခ်ခရိုင် အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ကာ မဲဆောက်မြို့ စင်ထရယ်ဟိုတယ်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားကူညီရေးအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံပြီး အလုပ်သမားများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်အားခ ရရှိရေးအတွက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် FTUB အဖွဲ့မှ ကိုကျော်မြင့်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် အလုပ်သမားအရည်အချင်း တိုးတက်အောင် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေး ဥပဒေရှင်းပြခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားခသတ်မှတ်ခဲ့ရပုံအကြောင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက် သည်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ အလုပ်သမား ခံစားခွင့်များကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်ဟု ကိုကျော်မြင့်က ပြောသည်။
ယခင်က ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့များကသာ အလုပ်သမားများအား ပညာပေးဆွေးနွေးမှုများရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ထိုင်းအစိုးရမှ လုပ် ငန်းရှင်များကို ခေါ်ယူ၍ ဥပဒေများ ရှင်းပြပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား များအတွက် ပိုမို ကောင်းမွန်လာဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း အလုပ်သမား အဖွဲ့များက ပြောဆိုနေကြသည်။
17:52 M W R N O R G No comments
ထားဝယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ကူညီနိုင်ရန် ဂျပန်-ထိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ ပါဝင်သော သုံးနိုင်ငံ ပူးပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ထူထောင်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အီတလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ပရီချိုင်း က ပြောကြားသည်။
14:40 M W R N O R G No comments
ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းများလည်း ပင်စင်လစာ ခံစားခွင့် ရရှိတော့မည်ဟု အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ သိရသည်။ ၁၉၅၅ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှုတွင် အဆိုပါ အချက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ခံစားမှုများ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးယုလွင်အောင်က ပြောသည်။ ၎င်းက ဆက်လက်၍
“ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် နှစ်ခုကတော့အတည်ပြုပြီးသွားပြီ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဲ ကျန်တော့တယ်” ဟု ပြောသည်။
လုပ်သားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှ အနားယူပြီး ပင်စင်လစာ ရရှိရန်မှာ လုပ်သားတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်း တစ်ခုတည်းတွင် အနည်းဆုံး လုပ်သက် ၁၅ နှစ် ရှိရမည့်အပြင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့မှ လစဉ် အချိုးကျ သတ်မှတ်နှုန်းထား ပမာဏကို ထည့်ဝင်ရမည်ဟု ဥပဒေမူကြမ်းပါ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ်ရှိ စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တစ်ဦးက “ဒီလိုပင်စင်လစာ ပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပေးလလည်း ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝန်ထမ်းလစာထဲက ဖြတ်တောက်ပြီး ပင်စင်လစာ ထုတ်ပေးမယ့် အဖွဲ့က အရင်းအနှီးလုပ်တဲ့အခါမှာ အရှုံးများ ပေါ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ ဒါကလည်း အရေးသိပ်ကြီးတယ်။ အဲဒီတော့ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကျော်တယ်လို့ပဲ ထင်တယ်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အမြတ်ငွေကနေ သီးခြား စုစုပေးသွားရင် ပိုကောင်းတာပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှ အနားယူသွားပါက ပင်စင်လစာပေးခြင်း စနစ်ကို စင်ကာပူအပါအဝင် အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများ လက်ရှိတွင် ကျင့်သုံးနေကြောင်း လူမှုဖူလုံရေး ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရသည်။ ဥပဒေသာ အတည်ပြုလိုက်ပါက မူလလစာ၏ ၁၅ ဆအား အရစ်ကျ သို့တည်းမဟုတ် ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် လစဉ်ခွဲဝေမှုဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ပေးအပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော် လုပ်သက် ငါးနှစ်ရှိ ဆေးကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက “တစ်လ နည်းနည်းချင်း ထည့်ပြီး ကိုယ်မလုပ်ချင်တော့တဲ့ အချိန်မှာ မူလ လစာရဲ့ ၁၅ ဆ ရမယ်ဆိုတာက ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါပဲ။ အဲဒီလို ပြောပြီး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။ ပင်စင်ဆိုတာမျိုးက အစိုးရဝန်ထမ်း အသုးံအနှုန်းဆိုတာလောက်ပဲ သိထားတော့ သိပ်တော့ မယုံချင်သေးဘူး”ဟု ပြောသည်။
အချိန် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိယူ၍ ပင်စင်လစာ ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းများအား အသိပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပါ ပူးတွဲပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံမှ ထပ်မံသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးက “ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက် တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့ ဥပဒေမျိုးလို့ သိထားရပါတယ်။ နာမကျန်းဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်က အစ လုပ်ငန်းရှင်က ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့် အချက်တွေ၊ အဖွဲ့မှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင် အဖွဲ့က လုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စတွေ ဒါတွေကအစ အသေးစိတ် ထည့်သွင်းထားတာပါ။ ဒါတင် မကသေးဘူး။ နောင်ရေး နေထိုင်ရေးအတွက်ကိုပါ စီစဉ်မှုက ရှိနေတော့ တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ ဥပဒေဆိုတာမျိုးလို့ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မလေးရှား၌ ဆန္ဒပြမည်၊ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ပါက ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးနိုင်
14:34 M W R N O R G No comments
သို့ပါသောကြောင့် ထိုနေရာများကို နံနက် ၈ နာရီမှ စတင်ပြီး လမ်းအားလုံးပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်မှု့ များဖြတ်တောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အထူးသတိပေးရပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ဂျူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သွားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ အတွေ့အကြုံအရ နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင် ပတ်သက်ပါက ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများကို သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ ပြန်လွှတ်ခဲ့တာကြောင့် မိမိတို့ စာရွက်စာတမ်း မှန်ကန်သော်လည်း မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ် ။ စာရွက်စာတမ်းမရှိသူများ, UN ကိုင်ဆောင်ထားသူ များအတွက် မနက်ဖြန် KL သို့ လုံးဝမလာကြဖို့ အထူးသတိပေးတင်ပြရပါတယ် ။ သတ်မှတ်ချိန်မှာ နေ့လည် ၂ နာရီဖြစ်ပြီး သတ်မှတ် ယူနီဖောင်းမှာ အဝါရောင် တီရှပ်ပြောင် ၊ အနီရောင် တီရှပ် ပြောင်များဖြစ်တာကြောင့် မနက်ဖြန် အတွက် ထိုအရောင်ပြောင် အကျီများမဝတ်ဆင်ရန် သတိပြုဖို့လိုပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမှ အချိန်မှီ ကြော်ငြာ ပေးသော် လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က မြန်မာများစွာ ကေအယ်လ် မြို့လယ်တွင် ဒုက္ခရောက်ပြီး သွားရန်ကားမရှိ တည်းစရာ ဟိုတယ် မလောက် ၊ စားစရာ ဆိုင်မရှိဖြင့် အလွန် ကသီလင်တ ဖြစ်ကြရ တာကြောင့် မနက်ဖြန် KL သွားမည့် သူငယ်ချင်း များကို လက်တို့ သတိပေးဖို့ အထူး အသိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ဆက်လက်ပြီး မသိရှိသေးသော သူများအတွက် KL တွင်ပြုလုပ်သွားခဲ့သော ၉.၇.၂၀၁၁ ဆန္ဒပြပွဲတုန်းက ပုံများကို ပူးတွဲတင်ပြရင်း .. မနက်ဖြန် ကျွန်တော်တို့ ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ မလေးရှား နိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူရှိ ဆန္ဒပြပွဲသတင်းများကို ဆက်တိုက် တင်ဆက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
01:33 M W R N O R G No comments
01:27 M W R N O R G No comments
01:18 M W R N O R G No comments
ရွှေလုပ်သားဂျာနယ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးသိစေဖို့ အကြံပြု တင်ပြချင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးအချို့နှင့် မြ၀တီ၊ မဲဆောက်၊ ကော့သောင်း၊ ရနောင်း ဘန်ကောက်၊ မဟာချိုင်နှင့် မြန်မာအများစုရှိသည့် နေရာများတွင် မြန်မာများ စားသုံးလေ့ရှိကြတဲ့ ဗူးသီးကြော်၊ ပဲကပ်ကြော်၊ ဘယာကြော်၊ စမူဆာ နှင့် အကြော်မျိုးစုံတို့အား ကြော်ရာတွင် ရေသန့်ဗူးပုလင်းခွံကို ပိုင်းဖြတ်ပြီး အကြော်ဆီဒယ်အိုးတွင် ထည့်ကြော် လေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီပလပ်စတစ်ပုလင်းအား ဆီပူထဲတွင် ထည့်ကြော်ရခြင်းမှာ အကြော်များ ကြွရွမှု တာရှည်ခံစေရန်
နဲ့ကြွကြွရွရွဖြစ်နေစေရန် ကော်ရည်အဖြစ် သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပလပ်စတစ် ကော်ရည်များ အစာအိမ်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်သွားသဖြင့် စားသုံးသူများ အတွက် ကျမ္မာရေးမှာ အလွန်စိုးရိမ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်အကြော်ဆိုင်များသန့်ရှင်ပြီးကျမ္မာရေးနှင့်ညီညွတ်သောစားသုံးဆီများဖြင့် ကြော်/မကြော်ကို သေချာ
စောင့်ကြည့်ပြီးမှ စားသုံးသင့်ကြောင်း ကျမ လက်တွေ့ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင့်။
Ref: Golden Workers
00:42 M W R N O R G No comments
ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် ယာယီပတ်စပို့လုပ်တာ၃နှစ်အတွင်း မြန်မာအလုပ်သမား ၂သန်း ကျော်လုပ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ ထိုင်းအစိုးက သတ်မှတ်ထားတာက ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာကြေး ဘတ်ငွေ ၅၀၀။ မြန်မာအစိုးရက ယခု ခရမ်းရောင် ယာယီပတ်စပို့စာအုပ်ခ ဘတ်ငွေ၅၀၀။ ဒါဆို အလုပ် သမားတစ်ယောက် ဘတ်တစ်ထောင် ဆိုရင် ယာယီပတ်စပို့ ရ ရမှာပေါ့။
တကယ့် လက်တွေ့မှာက ပွဲစား ကုမ္ပဏီကြီးပေါင်း ၆၇ ခုရှိ
မဟာထိုင်း လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းအစိုးရဆီက လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက် စာတမ်း နဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်ကြောင်း စိစစ်ခြင်း ၂ရပ်ပေါင်း အတွက် အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို အနည်းဆုံး ဘတ်ငွေ၁၆၀၀ ကနေ ၁၈၅၀ အထိ ပေါက်ဈေးရှိတယ်။
နောက် အောက်ဈေးလို့ခေါ်တဲ့ ပတ်စပို့ထုတ်ယူတဲ့အဆင့်မှာ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ အစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စားပွဲပေါ်ကို ရောက်ဖို့အတွက်ကြားပွဲစားကုမ္ပဏီကိုဘတ်ငွေ၁၈၅၀ဘတ်ကနေ၂၂၀၀ဘတ်အထိ ပေါက်ဈေး
ရှိတယ်။ ကားခနဲ့ စားစရိတ်တွေက သီးသန့်ကုန်ကျပါတယ်။
ဒီလို စာရွက်စာတမ်းတွေ ရပြီးတော့ မပြည့်စုံသေးဘူး။ ထောရော ၃၈/၁ အစစ်ရှိရမယ်၊ ၁၉၀၀ ငွေကျေစာ
ရွက်အစစ်တွေရှိရမယ်။ မိတ္တူနဲ့ မရဘူး ဆိုတာက လာသေးတယ်။ စာရွက်စာတမ်းအစစ်တွေ ကိုထုတ်မပေး တဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ သူဌေးရဲ့ အလုပ်သမားတွေဆိုရင် ပွဲစားသနားမှ သက်သာပါတယ်။ အနည်းဆုံးဘတ်ငွေ သုံးလေးရာ ကနေ ဘတ်ငွေ တစ်ထောင်အထိ ပွဲစားတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက တောင်းစားတတ်ကြပါတယ်။
ကြားပွဲစားများအထက်ပါ ကုန်ကျငွေတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်တော့ အနည်းဆုံး ငါးထောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ပွဲစားတွေက သူတို့ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် အနည်းဆုံး ဘတ် ၁၀၀၀ ယူကြတယ်။ ခရီးအကွာအဝေးအလိုက် ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ အထိ ကောက်ကြလေတော့ ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ဖို့ အတွက် အလုပ်သမားတစ်ယောက် ဟာဘတ်ငွေ ၇၀၀၀ ထက်မနည်း ကုန်ကျနေပြီးဖြစ်တယ်။
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် Work Permit လုပ်ရပါတယ်။ WP အတွက် လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ စာရွက် စာတမ်း တွေနဲ့ အတူ ကျမ္မာရေးဆေးစစ်စာရွက်တွေ အပြည်အစုံနဲ့ လုပ်ရပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းရှင် နဲ့ ကြား ပွဲစား ခမပါပဲ ၂နှစ်စာအလုပ်လုပ်ခွင့်အတွက် အနည်း ဆုံးဘတ်ငွေ ခြောက်ထောင်ကျော်ကုန်ကျပါတယ်။ အပြင်သူဌေး ဒါမှမဟုတ် ပွဲစားနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘတ်ရှစ်ထောင်ထက်မနည်း ကုန်ကျပါတယ်။
“လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စကိုဘာကြောင့် ခက်အောင်လုပ်နေကြသလဲ”
မြန်မာပြည်က လာရောက် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေ မလုပ်
ချင်၊ မလုပ်နိုင်တဲ့၊ ညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်၊ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်၊ အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ် တွေကိုလုပ်နေကြရတာ
ဖြစ်တယ်။ သူများမလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကို မှ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရချင်ကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အတွက် စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်တားဆီးထားတာနဲ့ ၊ ကုန်ကျတဲ့ငွေကလည်း အလွန်များတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းသောစကားကိုပြောပါဆိုရင် ထိုင်းအစိုးဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ တရားဝင်ဖြစ်ခွင့် အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်ကွပ်ထားပြီး မတရားခေါင်းပုံဖြတ်ထားလွန်းတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာတွေလုပ်သမျှ လုပ်အားခကို အကုန်လုံးယူထားချင်တယ်။ အနိမ့်ကျဆုံး အလုပ်တွေကိုလုပ် နေကြရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဒီလောက်ထိ ခေါင်းပုံမဖြတ်သင့်ဘူး။ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့ဟာ ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက် လွယ်ကူ မြန်ဆန်ပြီး သက်သာချောင်ချိတဲ့ အစီအမံမျိုးကို စဉ်းစားဖို့သင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်သမားတွေဆီက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အကျိုးအမြတ်မရှာသင့်ဘူး။
“စုတ်ပဲ့ပြီး အောက်တန်းကျတာကတော့ ပျောက်ပျက်မသွားသေးပါ”
ယာယီပတ်စပို့နဲ့ WP တို့ လုပ်ရတဲ့အတွက် ဘတ် ၂သောင်းဝန်းကျင်လောက် တနင့်တပိုး ကုန်လိုက်တဲ့
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တကယ် လုံခြုံရဲ့လားလို့ ကြည့်လိုက်ပြန်တော့။ မရှိဘူး
ထိုင်းပုလိပ်တွေက ဗမာမြင်ရင် ဖမ်းတယ် ညစ်ပတ်တယ်။ ဘယ်နှယ်ဗျာ ပတ်စပို့ရှိလို့ ဟိုနားဒီနား သွား
ပါတယ်ဆိုမှ ထောရောပါလား၊ ၁၉၀၀ ငွေကျေ စာရွက်ပါလား၊WP ၀တ်ပါမစ်ပါလား ဆိုပြီး စစ်ဆေးတယ်။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခရီသွားလာခွင့်ရဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ အကုန်အကျခံ လုပ်ထားတဲ့ ပတ်စပို့ တစ်ခုတည်း
နဲ့ ခရီးသွားလာခွင့် မရရှိပြန်ဖြစ်နေတယ်။ လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။
ဘာပဲလုပ်ထားထား လွတ်လွတ်လပ်လပ် အလုပ်ပြောင်းရွှေ့လို့မရတာကလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုး။
လုပ်ငန်းရှင်က သိမ်းထားလို့ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်သွားလို့ သေသွားတဲ့ပတ်စပို့က ဒုနဲ့ ဒေး။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ လျှော့နိုင်တာကနှစ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို သနားလို့ရှိရင် လျှော့ပေးနိုင်တာရှိပါတယ်။ (၁) ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခွင့်ကို ပတ်စပို့စာအုပ်သက်တမ်းနဲ့ အတူတူ ၆နှစ် သတ်မှတ်ပေးပါ။ (၂) အလုပ်လုပ်ခွင့်WP ကိုလည်း စာအုပ်သက်တမ်းနည်းတူထားပေးပါ။(၃) ရက်ပေါင်း ၉၀ သတင်းပို့ တုံးထုရခြင်းကို လုံးဝ ရပ်ပစ်ပါ။
ဒီ အချက် ၃ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက ထိုင်းအစိုးနဲ့ ညှိလိုက်ရင် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်လည်း မပျက်၊ အလုပ်လည်း မရှုပ်တော့သလို အကုန်အကျလည်း အထူးသက်သာသွားပါမယ်။ ကြားပွဲစားတွေ ဆီမှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာတွေ လျှော့နည်း သက်သာသွားစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် အလုပ်သမား ဖြစ်ခြင်းကိုလည်း အားပေးရာရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်စပို့ မလုပ်ရင် ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ တော့တာကြောင့် အလုပ်သမားတွေက လုပ်ကြရတယ်။ ဒီအားနည်းချက်ကို ကြားပွဲစားတွေက ရိုးရိုးလား ရှယ်လား၊ အမြန်လား အနှေးလားဆိုပြီး ရိုက်စား လုပ်နေကြပြန်တယ်။ ပွဲစားတွေက စာရွက် စာရွက် တွေကို ကပ်ခွာ လုပ်ပြီး နယ်စပ်ကို ဆင်းခိုင်း လို့ မြန်မာတွေ ရာချီပြီး ထောင်ကျနေကြပြီ။
မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ပတ်စပို့လုပ်ဖို့ အပ်ထားတဲ့ ဘတ်ငွေတွေ သိန်းပေါင်းများစွာ လိမ်ပြီး ထွက်ပြေး သွားတဲ့ပွဲစားတွေ အများကြီးရှိနေပြီးဖြစ်ပေမယ့် လိမ်သွားသူတွေနဲ့ အမည်ခံထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိ သူတွေ စစ်ဆေးတာမျိုး၊ အရေးယူတာမျိုး ခုထိ မရှိသေးဘူး။ ခံရတာက မြန်မာအလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်။ မဟာချိုင်မှာ ပွဲစားက ပတ်စပို့ အတု လုပ်ပေးတယ်။ ကိုင်ဆောင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဘတ်ငွေ ၂သိန်း ဒဏ်ငွေရိုက်တယ်။ အတုလုပ်ပေးသူကို ရှာဖွေဖမ်းဆီး အရေးယူတာမရှိဘူး။
Posted in: ၀၈။ ဆောင်းပါး
00:25 M W R N O R G No comments
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းတွင် ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကုန် တွင် ရပ်ဆိုင်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း Italian-Thai Development Pcl က ပြောသည်။
ထားဝယ်စီမံကိန်းအတွက် အထူးအခွင့်အရေးများ ရရှိခဲ့သော ITD အနေဖြင့် သံမဏိစက်ရုံ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ထားဝယ်တွင် မြေရောင်းစာချုပ်တခုကို ဇူလိုင်လမတိုင်မီ ချုပ်ဆိုရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်း ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Premchai က ရှယ်ယာဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
စီမံကိန်းမှာ တနင်္သာရီတိုင်း သာဂရမြို့ဟောင်းအနီး တည်ရှိကာ ထားဝယ်မြို့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂ဝ ခန့် အကွာရှိ ရေဖြူမြို့နယ် နဖူးလယ် ကျေးရွာအနီးတွင် ရှိပြီး နအဖ အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ Italian-Thai Development Public Co.,Ltd နှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၇၅ နှစ် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခွင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
00:23 M W R N O R G No comments
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (FDI) များ ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေကို ယခုကျင်းပနေသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က အတည်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခုတွင် အလုပ်သမတချို့ ထမင်းစားရပ်နားနေသည်ကို ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလအတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
“ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေက အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို စ တင်တယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ပို့တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကို ပို့လာတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တယ်” ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
00:18 M W R N O R G2comments
ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မြန်မာ ဒု အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ် ခရမ်းရောင်နှင့် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း အစိမ်းနုရောင် လက်မှတ်ကို ပြသနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Bangkok Post)
မြန်မာ အလုပ်သမားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ဘန်ကောက်၊ မဟာချိုင်း၊ စမွတ်ပရာကန်၊ စူရက်ဌာနီနှင့် ချင်းမိုင်မြို့များတွင် ထိုင်းနှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ ထုတ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ချင်းမိုင်မြို့ရှိ ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးတာ ၀န်ခံ ဦးတင်မောင်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ချင်းမိုင်မြို့ ယာယီ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးတွင် ကပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ် ကြော်ငြာကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - သန်းထိုက်ဦး / ဧရာဝတီ)
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ၂၀၀၉ နှစ် အထိ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် ရနောင်း၊ မဲဆောက်၊ မယ်ဆိုင် စသည့် ဒေသများ၌ ယာယီ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးရေး ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါင်း ၇၅၀၀၀၀ အထိ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မြန်မာ ဒု အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
15:26 M W R N O R G No comments
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က အကြံပြုထားသည့် ကျမ်းကျိန်ကတိသစ္စာပြုချက် စကားလုံး ပြုပြင်ရေးအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးဆောင် ဖြေရှင်းပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၆ ခု ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းထံ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအေးမောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပေးပါ။ ကျနော်တို့ကတော့ နောက်ကနေပြီးကာမှ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကို လိုလားပါတယ်။ ခုလို ကျနော်တို့ သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ အားလုံး ပါဝင်နိုင်အောင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုတာကို ကျနော်တို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါ” ဟု ပြောသည်။
ကျမ်းကျိန်ကတိသစ္စာပြုချက် စကားလုံး ပြုပြင်ရေးအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးဆောင် ဖြေရှင်းပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၆ ခု ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းထံ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့ (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိ်မ)
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အမတ်အပါအဝင်၊ တသီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦးနှင့် အခြား ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီ ၁၆ ခုမှ လွှတ်တော်အမတ်များက လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သည့် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် ပါတီတို့မှလွဲ၍ လွှတ်တော်ရောက် ကျန်ပါတီများအားလုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်များ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ NLD လွှတ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်ရေး သူရဦးရွှေမန်းထံ
“အဲဒါတွေကို ထောက်ရှုပေးပါ ဆိုပြီးကာမှ ကျနော်တို့က မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီဥစ္စာတွေကို ပြုပြင်ပေး ရမယ့်တာဝန် ဘယ်သူ့မှာရှိသလဲဆိုရင် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ အများဆုံးရှိနေတဲ့ပါတီ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အိမ်ကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူက အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်ကို ကြိုဆိုမှပဲ။ စာနာထောက်ထားတဲ့အားဖြင့် သဘောထားကြီးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့က အလေးအနက်ထားရာ ကျမှာပေါ့ဗျာ” ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
လွှတ်တော်အမတ်များ မေတ္တာရပ်ခံမှုအောင်မြင်ပါက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ဦးဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဇယား ၄ ပါ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်” အစား “လေးစားလိုက်နာ” ဟူသည့်စကားလုံးသို့ပြင်ဆင်လိုကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ၍ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှထောက်ခံကာ ပြင်ဆင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေးသည် ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီးမွန်း တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟုလည်း လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
15:23 M W R N O R G No comments
15:17 M W R N O R G No comments
RFA ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်က အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ဆပ်ကော်မတီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးရာ ကြားနာပွဲပြုလုပ်နေစဉ်။
20:35 M W R N O R G No comments
(‘စီးဆင်းခဲ့သော ကဗျာများ’ စာအုပ်မှ ...)
Posted in: ၀၇။ ကဗျာ